Chikwereti: Edgar Cervantes / Android Chiremera
Smart TVs zvachinja maitiro ekuvaka kwedu dzimba dzemitambo. Ivo vanotipa mukana wekuwana kune ese edu epamoyo mafuratifomu pasina chero chakawedzera Hardware. Izvo zvakanaka kuve nekwaniso yekumhanyisa binge-yakakodzera mashoo pakubata bhatani, asi chii chinoitika kana chisingashande? Hezvino zvekuita kana Netflix haisi kushanda pane yako LG TV.
Onawo: Iyo yakanakisa OLED TV inobata
Netflix inouya isati yatakurwa pane ese maLG's smart TV, izvo zvinoita kuti zvive nyore nyore kuwana. Zvese iwe zvunofanirwa kuita kuti utange kupinda muakaunti yako. Kana iwe ukazoona kuti haugone kudzokera kuzvikamu zvako zvaunofarira zveRima kana iyo Great Britain Baking Show, heino maitiro ekugadzirisa dambudziko.
Tarisa yako network yekubatanidza uye tarisa paNetflix
Nhanho yekutanga yekugadzirisa matambudziko mazhinji ndeyekuve nechokwadi chekuti wakanyatso kubatana neinternet. Kana yako LG TV isina kubatana, zvingave zvine musoro kuti Netflix haisi kushanda.
Kutanga, edza kuti yako internet iri kushanda pane chimwe chishandiso sefoni kana laptop. Kana ikashanda pane chimwe chishandiso, saka edza kumisazve kubatanidza paterevhizheni yako. Iwe unogona zvakare kugadzirisa modem yako uye yako router kana iwe usingakwanise kuita kuti TV yako ibatanidzwe. Izvi zvinofanirwa kuvapa nguva yakakwana kuti vanyatsovhara, wozozvivharira mukati.
Kana uchinge wagadzirisa yako yeWi-Fi kubatana, zvinogona kubatsira kutarisa mamiriro eNetflix. Iyo chikuva ine yepamutemo rutsigiro saiti izvo zvinofanirwa kukuzivisa iwe kana zviri kuita matambudziko.
Kana Netflix pachayo ichikupa mwenje wakasvibira, uye yako Wi-Fi iri kushanda mushe, saka ungangoda kuenda kune edu apfuura matanho.
Onawo: Nyowani LG smart TV? Heano akanakisa maapplication ekurodha pasi
Gadziridza yako LG TV's firmware kana Netflix isiri kushanda
Zvinogona zvachose kuti TV yako neNetflix app irikumhanya pane akasiyana mavhezheni. Iwo maviri anovandudzwa zvakasiyana pa LG TV, kuti iwe ugone kuona kuti yako app yakazvigadziridza otomatiki nepo TV isina.
Ose ari maviri anofanirwa kugadzirisa otomatiki, asi hazviwanzo kushanda nenzira iyoyo. Neraki, LG yakagadzira vhidhiyo nekukurumidza iyo inokuratidza maitiro ekuvandudza TV yako:
Vhidhiyo iyi ane makore mashoma zera panguva ino, asi ruzhinji rweruzivo runofanira kuramba ruine chokwadi. Tevera matanho ari muvhidhiyo uye edza kutangazve TV yako.
Delete uye dzosera Netflix
Zvitende kana kuti kwete, mafaera uye mapacheji anogona kuve akaora pane yako LG TV, uye izvi zvinogona kunge zviri izvo zvinoita kuti Netflix isashande. Hazvina kutyisa sezvazvinonzwika, zvisinei, uye iwe unofanirwa kukwanisa kuzvigadzirisa nekubvisa iyo app uye kuisazve iyo zvakare. Hezvino zvekuita:
Chindai Imba / Kutanga bhatani pane yako kure kure kuvhura yekutanga bar.
Tsvaga Netflix pane yekuburitsa bhawa uye hover pamusoro payo kusvikira museve waonekwa.
Dzvanya pamuseve, wobva wasarudza iyo "X" chiratidzo.
Simbisa kuti iwe unoda kubvisa iyo app nekudzvanya OK.
Click on Imba / Kutanga bhatani kuvhura yekutanga bar.
kuwana LG Zviri mukati Chitoro pane yekutanga bar uye tinya pairi.
Tenderera nemiseve iri kure kwako kuti usvike paApp tab wobva wadzvanya pairi.
Tsvaga Netflix uye tinya gadza.
Gadza nzvimbo yako nemazvo kana Netflix isiri kushanda pane yako LG TV
Netflix inopa akasiyana emaraibhurari emukati munzvimbo dzakasiyana nekuda kwezvibvumirano zvakaomarara, uye hazvitore nemutsa kutonga vanoputsa. Iwe ungatofanira kuzviseta iwe kudzoka kumusika wako wemba kuti ugadzirise sevhisi.
Semuenzaniso, kana uine nzvimbo yako yakagadzirirwa kuAustralia iwe uchiri muUnited States, Netflix inogona kukuvharira kunze. Panzvimbo pekukupa mukana kune chero raibhurari yenyika, Netflix inokuchengetedza kunze zvachose kusvikira wagadzirisa mamiriro ako.
Kana izvozvo zvikaitika, hezvino zvekuita:
Chindai Imba / Kutanga bhatani uye vhura iyo yekutanga bar
Tsvaga iyo Settings cog pakona yepamusoro kurudyi.
sarudza Zvirongwa Zvese kuzasi.
Click on General kuruboshwe.
Isa nzvimbo yako chaiyo.
Onawo: Maitiro ekurodha pasi mabhaisikopo nemaTV pazvinhu zveNetflix
Wakamboedza here kuidzima uye kudzokerazve?
Chikwereti: Adamya Sharma / Android Chiremera
Iwe unogona kunge wakamboedza izvi pamberi pechinhu chero chipi zvacho pane chinyorwa, asi zvinogara zvakakodzera imwe pfuti. Kana iwe watoedza kuburitsa TV yako kuti ive nyoro reset, inguva yeiyo yakazara fekitori yakakosha. Nehurombo, izvi zvinoreva kuti zviwedzere kushanda nesimba nekuti uchafanirwa kudzoka kumashure mune ako ese mamwe masevhisi ekushambadzira zvakare.
Kana iwe warova iyi poindi, hezvino zvekuita:
Vhura iyo Settings cog kumusoro kurudyi.
Click on General, zvino sarudza Dzosera kune ekutanga Zvirongwa.
Pinda password yako yeTV kana iwe ukaisa imwe.
Tevedza yakasara setup matanho.
Idzi ndidzo dzese nzira dzakajairika dzekugadzirisa Netflix kana isiri kushanda pane yako LG smart TV. Hapana chimwe chazvo chinofanira kukutora iwe zvakareba zvakanyanya, uye chimwe chazvo chinosungirwa kukudzosera panzira! Kana zvisiri, inogona kunge iri nguva yekutarisa yedu yepamusoro TV inobata.